China EVA ရေမြှုပ်သည်သင်္ဘောကာကွယ်ရေးစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက် Fender ဖြည့်သည် Haohang
သင်္ဘောအကာအကွယ်အတွက် EVA ရေမြှုပ်အကာဖြည့်
၁ ။ မနစ်မြုပ်နိုင်သောဒီဇိုင်း။ ပင်လယ်ပေါ်ရှိ float လှံတံအဖြစ် 3.Can ။ 4. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ကုန်ကျစရိတ် - ချွေတာ။ 5. အသားအရေကိုထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ရင်တောင်မှအပြည့်အ ၀ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ 6. install, ရွှေ့နှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသော။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်
EVA မြှုပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအကာအရံသည်အပြင်ဘက်အကာအကွယ်အလွှာအဖြစ် polyurethane ပစ္စည်းများနှင့်အတူအပြုသဘောဆောင်သည့်အကာအရံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ခံနိုင်ရည်ရှိသောအတွင်းပိုင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသော polyethylene သို့မဟုတ် plastic foam core ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသောအခါသင်္ဘော၏စွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူရန် comoressive ပုံပျက်သောအားဖြင့်။ ဒါကြောင့်ဆိပ်ခံတံတားနှင့်သင်္ဘောမှအဖျက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်အောင်။
Polyurethane floating fender သည်အပြင်ဘက်တွင်တည်ဆောက်ထားသော compressed fender တစ်ခုဖြစ်သည် polyurethan ပစ္စည်းများဖြင့်ကာကွယ်သောအလွှာနှင့် polyurethane မြှုပ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည် ပလတ်စတစ်အမြှေးပါးအဖြစ်ကြားခံကြားခံအဖြစ်; သင်္ဘောကျင်းများနှင့်သင်္ဘောများအပေါ်အဖျက်သက်ရောက်မှုများဖြစ်လိမ့်မည်
၏သင်တန်းအတွက်သင်္ဘောများထံမှသက်ရောက်မှုစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူရန် thecompression အားဖြင့်လျှော့ချ polyurethane floating Fender သုံးပြီး။
ပင်လယ်ပေါ်ရှိ float လှံတံအဖြစ် 3.Can
4. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ကုန်ကျစရိတ် - ချွေတာ
5. အသားအရေကိုထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်ရင်တောင်အပြည့်အ ၀ အလုပ်လုပ်ပါတယ်
6. install, ရွှေ့နှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသော။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်
အမြှုပ်အကာများကို polyurethane elastomer အရေပြား (သို့မဟုတ်ရာဘာအရေပြား)၊ နိုင်လွန်အားဖြည့်အလွှာနှင့်ပိတ်ထားသောဆဲလ်ဒဏ်ခံအမြှုပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ဖောက်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ HAOHANG ထုတ်ကုန်များကိုအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်ကြသနည်း။
၁။ ငွေတန်ဖိုးကိုသင်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပေါ် မူတည်၍ အကောင်းဆုံးစျေးကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၂။ ပြိုင်ဘက်ကင်းကျွမ်းကျင်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကတိပေးသည်။
၃။ ကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းသက်တမ်းနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းသည် ၁၀-၁၅ နှစ်သက်တမ်းရှည်စွာသက်တမ်းရှိသည်။
ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်3နှစ်အရည်အသွေးအာမခံကာလရှိသည်။
4. Professional ပြီးနောက် - အရောင်းဝန်ဆောင်မှု။ ၂၄ နာရီအတွင်းမည်သည့်ထုတ်ကုန်၏မေးခွန်းများကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ပြသနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များအားကူညီပေးပါမည်။
ရှေ့သို့ Airbag ပြုလုပ်ရန်အတွက်တာယာအထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသဘာဝရော်ဘာဖျာ
နောက်တစ်ခု: ပုံသဏ္Inာန်ဖောဖောပူဖောင်းများသည် Culvert အတွက်ရော်ဘာပြွန်
အဏ္ဏဝါလေအိတ်များ, တရုတ်ရော်ဘာအကာအရံ, Tec သင်္ဘော, ရော်ဘာအကာအရံ, လေယာဉ်အိတ်, Composite ပိတ်ပင်တားဆီးမှု,